‘एनसेल सर्ट फिल्म कम्पिटिशन’: ‘बुवा’ले पायो पहिलो पुरस्कार
काठमाडौं । एनसेल प्रा.लि.ले आयोजना गरेको ‘एनसेल सर्ट फिल्म कम्पिटिशन’अन्तर्गत कमल सुवेदी र उनको समूहले बनाएको ‘बुवा’ फिल्म पहिलो पुरस्कार पाउन सफल भएको छ । प्रतियोगिताको थिम नै बुवा रहेको थियो ।
बुवाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा एनसेलले साउनको तेस्रो सातदेखि ईच्छुक छोटो फिल्म निर्माताहरूलाई प्रतियोगितामा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो । प्रतियोगितामा ७० ओटाभन्दा बढी छोटा फिल्महरू समावेश भएका थिए । प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा क्युएफएक्स सिनेमाका संस्थापक एवं चलचित्र उद्यमी नकिमउद्दीन, निर्देशक आसिफ शाह र प्रख्यात पत्रकार विद्या चापागाईं रहेका थिए ।
प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभालाई आफ्नो सीप र कौशल प्रस्तुत गर्ने प्लेटफर्म प्रदान गर्नु र बुवाको मुख हेर्ने दिन ग्राहकका साथ सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गर्न मिल्ने सामग्रीहरू हेर्दै यो विशेष दिन मनाउनु रहेको छ । बुधवार साँझ क्युएफएक्स सिनेमा, लबिम मलमा उत्कृष्ट १० छोटा फिल्महरूको प्रिमियर शो गरिएको थियो ।
प्रतियोगितामा समावेश र उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल छोटा फिल्महरूका कथाले रचनात्मक र भिन्नाभिन्नै शैलीमा बुवासँग सन्तानहरूका सम्बन्धका बारेमा चित्रण गरेका थिए । १० ओटै उत्कृष्ट छोटा फिल्महरू बुवाको मुख हेर्ने दिन एनसेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ । कार्यक्रममा चर्चित कलाकार हरिवंश आचार्यले भने, ‘छोटो समयमा कथा भन्नु राम्रो खुबी हो । यसरी नै सिनेमा बनाउँदै सिक्दै जाने माध्यम हो र आशा छ उहाँहरूलाई पछि ठूला–ठूला पर्दा देख्न पाउने छौं ।’
कार्यक्रममा उत्कृष्ट फिल्महरूको नाम सार्वजनिक गरिनुका साथै सहभागीहरूलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । एनसेलका चिफ टेक्निकल अफिसर मोहम्मद अदिल ईसरारले उत्कृष्ट पहिलो, फस्ट रनर अप, सेकेण्ड रनर अपलाई पुरस्कार र अन्य दुई सर्ट फिल्मलाई पनि सान्त्वना पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
पहिलो हुने सर्ट फिल्म ‘बुवा’ले रू. १ लाख नगद पुरस्कार र समूहका तीनजनाले १२ महीनासम्म प्रत्येक महीना १० जीबी डेटा पाएका छन् । यसका साथै यो समूहले निर्देशक आसिफ शाहसँग सुटिङको बारेमा पनि सिक्ने मौका पाउनेछन् । विशाल न्यौपाने र उनको समूहले बनाएको फिल्म ‘द ईण्ड अफ कल्चर’ले दोस्रो पुरस्कारस्वरूप रू. ७५ हजार नगद पुरस्कार र समूहका तीन जनाले१२ महीनासम्म प्रत्येक महीना १० जीबी डेटा प्राप्त गरेका छन् । द नेक्स्ट लेभल प्रोडक्सनको ‘वर्ल्ड एज होम’ले तेस्रो हुँदै रू. ५० हजार नगद पुरस्कार जित्नुका साथै समूहका तीन जनाले १२ महीनासम्म प्रत्येक महीना १० जीबी डेटा पाएका छन् ।
राजा महर्जनको ‘बुवा’ र राइजिङ स्टार नेपालको ‘ड्याड, सन एण्ड ल्यापटप’ले सान्त्वना पुरस्कार हात पारेका थिए । सान्त्वना पुरस्कारअन्तर्गत यी दुई छोटा फिल्म दुवैले रू. २५/२५ हजारका साथै फिल्म निर्माण समूहका ३/३ जनाले प्रत्येक महीना १० जीबी एनसेल डेटा १२ महीनासम्म पाउनेछन् ।